Tallaabooyinka Faafida ee Magaalada Istambul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulTallaabooyinka Faafida ee Magaalada Istambul
25 / 03 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY, taraamka
tallaabooyinka faafa ee metro istanbul
Marka la eego la dagaallanka cudurka faafa ee coronavirus, oo noqday dhibaato caalami ah, hay'ad kasta iyo shaqsiyaadka bulshada ayaa leh waajibaad muhiim ah. dhammaan meelaha maalin ka badan 2 milyan oo ka shaqeeya tareenka magaalada rakaabka-waday Turkey ugu weyn la Metro Istanbul labadaba ka wakiil ah oo rakaab ah si loo ilaaliyo caafimaadka ee labada saldhig ee ka shaqeeya iyo rakaabka iyo shaqaalaha xiriir, in kastoo saldhigyada iyo xafiisyada, refectory isticmaala oo kaliya shaqaalaha ee xerada, isweydaarsiga waxay ka taxadirtay inay bixiso jawi ku habboon talaabooyinka looga hortago fayraska meelkastoo Bakhaarka ah.
Covid-19 - Waa maxay Coronavirus-ka Cusub?
Waa magaca loo yaqaan nooca fayraska ee sababa cudurka dilaaga ah ee dunida looga dhawaaqay natiijada ka dhalatay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha laga bilaabo Janaayo 2020. In kasta oo fayraska corona uu yahay fayruus ay ogyihiin masuuliintiisa laakiin uusan cudurka u keenin bini'aadamka, wuxuu ku faafayaa xayawaan bina aadam ah ka dibna wuxuu u gudbaa bina-aadamka. Ganacsiga maanta wuxuu noqday cudur adduunka oo dhan ku dhaca muddo yar gudaheed sababao awgood awgood iyo muhiimadda safarka shaqsiyeed. Ugu dambeyntiina, tan waxaa ku dhawaaqay Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) inuu yahay Faafida Adduunka - Faafida Adduunka.
Tallaabooyinka ay diyaariyeen Metro Istanbul natiijada tillaabooyinka, daraasadaha iyo kiisaska laga soo qaaday adduunka oo dhan waa sida soo socota;
Shaqadayada Kahor Khatarta Faafa
Annaga oo ah Metro Istanbul, markii cudurka uusan wali ka muuqan waddankeena, waxaan kala shaqeynay Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul talaabooyinka ka hortagga.
Hawl wadeenno qaran iyo kuwa caalami ah, mas'uuliyiinta gaadiidka iyo ururada ayaa la daba galay oo xiriir ayaa la sameeyay, iyo qaban-qaabada iyo daraasadaha laga sameeyay adduunka oo dhan waa la baaray. Baadhitaannada iyo qiimaynta ayaa waxaa gacanta ku hayey Guddiga Caafimaadka ee Magaalada Istambul oo ay weheliyaan sharraxaadda Wasaaradda Caafimaadka, Guddiga Sayniska iyo hay'adaha dawladda ee la xidhiidha, tallaabooyinka la qaadi doono haddii uu ka dillaaco waddankeenna, qorshayaasha waxqabadka ayaa la cusbooneysiiyay daraasadona waxaa lagu bilaabay qaab-dhismeedka horudhaca ah. Diyaar qorshe hawleed TÜRSİD (Turkey Rail System Wadayaasha Association) ayaa sidoo kale lala wadaago.
Taxadaradeenna looga hortago khatarta dillaaca
Maalin kasta in ka badan 2 milyan oo rakaab-saarnaayeen shaqaale ee ugu weyn dalka Turkiga ayaa ka mid ah nidaamka tareenka magaalooyinka, rakaabka iyo shaqaalaha si ay u ilaaliyaan caafimaadka, si ay u ka qayb si looga hortago faafidda cudurka dillaacay waxaan lahaa tallaabooyinka soo socda si aad nolosha.
Taxaddarrada loo qaado Rakaabkeenna:
1. Dhamaan noocyada qalabka iyo dusha sare ee rakaabkeena iyo shaqaalaheena ay la xiriiraan, oo ay ku jiraan meelaha gudaha ah ee gawaaridayada oo dhan iyo warshadaha, mashiinada tigidhada, wiishashka, wiishleyda, jaranjarooyinka jaranjarada iyo fadhiyada saldhigyadeena, ayaa lagu baabi'iyay agab jeermis dila ah muddo 30 maalmood ah. Sunta jeermiga la isticmaalay waxaa lagu dabaqay habka qulqulaya waxaana ku jira walxaha sunta ka hortagga ee aan waxyeelayn caafimaadka aadanaha.
2. Qorshooyinka waxqabadka ee shirkadaha gaadiidka dadweynaha iyo kuwa caalamiga ah iyo
Codsiyada 'Covid-19' waa la baarey oo codsiyadeenna hadda waa la qiimeeyay.
3. Si loo yareeyo cadaadiska nafsaaniga ah ee saaran rakaabkeena iyo inaan si sax ah ugu sheegno, macluumaadka iyo sawirrada la xiriira la-dagaallanka jeermiska iyo daraasadaha nadaafadda ayaa la diyaariyay. Shaqooyinkaas waxaa lala wadaagay shaashaddeena dhijitaalka iyo xisaabaadka warbaahinta bulshada ee gawaaridayada iyo xarumahayada.
4. Maaskaro ayaa la bilaabay in la siiyo rakaabka dhibku soo gaarey intii safarka lagu jiray, loo baahan yahay in la aado xarunta caafimaadka ama codsatay taageero caafimaad.
5. In kasta oo ay hoos u dhacday tirada rakaabku, waxaa la go’aansaday in lagu sii wado duulimaadyada si aan looga dhigin dhibanayaasha rakaabkeenna iyada oo la raacayo go'aannada IMM.
6. Ilaa go'aan labaad, Duulimaadyadii Night Metro la joojiyay.
7. Badanaa loo adeegsado safarka dalxiiska iyo lambarrada rakaabka
TFN Maçka-Taşkışla iyo TF90 Eyüp-Piyer Loti tefelerik, oo hoos udhacay 1%, ayaa si ku meel gaar ah loogu xiray howlahooda.
8. Go'aanka ku saabsan isticmaalka bilaashka ah ee gaadiidka dadweynaha ee xirfadleyda daryeelka caafimaadka ayaa la dhaqan geliyay.
9. Si looga digayo rakaabkayaga “Badbaadi Meelahaaga Bulshada” ee gawaarida nidaamka tareenka, dhejiyayaasha leh digniinta fadhiga ayaa la bilaabay in lagu dabaqo gawaarida.
Taxaddarrada loo qaado Shaqaalaheena:
1. Shaqaalaha halista ugu jira inay xiriir dhow la yeeshaan rakaabka waxaa lasiiyay tababar nadaafadeed, iyo inta jeer ee nadaafadda la kordhiyay aagagga ay ka shaqeeyaan.
2. Guryaha tareenka, dusha sare ee meelaha ay ku xirmaan darawaladayada tareenka waa la jaba / waa la jeermisyaa.
3. Tallaabooyin ayaa la qaaday si loo hubiyo nadaafadda iyo amniga SMAMP (Shaqaalaha Gurmadka Degdegga ah ee Gaari-wadista ah) ee ka shaqeeya M5 Üsküdar-Çekmeköy darawalada gawaarida gawaarida waddo la'aanta.
4. Bayaanka iyo go’aamada ay soo saareen IMM iyo Wasaaradda Caafimaadka isla markiiba waa la raacay, macluumaadka iyo waxqabadkana waxaa lala wadaagay shaqaalaheenna.
5. Kala-baxa ayaa lagu fuliyay goob kasta oo lala xiriirayo, oo ay ku jiraan dhismayaashayada, aqoon-isweydaarsiga, meelaha la wadaago, gaadiidka iyo waddooyinka tareenka, iyo qalabka shaqada, iyo inta jeer ee nadaafadda la kordhiyay.
6. Iridda laga soo galo dhismaha, cabiridda dabka waxaa lagu bilaabay aalado aan lala xiriirin.
7. Fasaxa maamulka waxaa loo adeegsaday si waafaqsan Xeerka Madaxweynaha ee shaqaalaheena qaba dhibaatooyinka caafimaad ee raaga, naafada, haweenka uurka leh iyo kuwa ka weyn 60 sano.
8. Shaqaalaha O Çalışma, qorshooyinka waxaa loo sameeyay inay taageeraan dalabka #evdekal ayagoo suurta galinaya in tiro yar oo shaqaale ah ay u baxaan sida ugu macquulsan nidaamyada shaqada fog iyo dib u adeegsiga.
9. Ku dhaqanka nadaafadda ayaa lagu kordhiyay hoolka cuntada lagu karsado iyo foornooyinka shaaha, waxaana la soo saaray go'aamo cusub si looga hortago in lala xiriiro shaqaalaha waaxdan. Meelmarinta xirmada ayaa la bilaabay qeybinta cuntada, iyo dabagalka maalinlaha ah ee kafateeriyada iyo shaqaalaha xarunta shaaha ayaa lagu daray qorshayaasha ganacsiga.
10. Shaqaalaha u safraya dibada ayaa la aqoonsaday lagana daba galay Qorshaha Waxqabadka Caafimaadka.
11. Shaqaalaha iyo shirkadaha waxaa lagu wargaliyay si ay ula xiriiraan alaab-qeybiyeyaasha taleefan iyo emayl, ayna u yareeyaan soo-galooyinka booqashada iyo booqashada shirkadda.
12. Nidaamyada Qorshaha Waxqabadka Degdegga ah iyo mabaadii'da ayaa laga wada hadlay ajandaha "coronavirus" ee OHS guddiga. Qorshaha ficilka ayaa la cusbooneysiiyay oo lala wadaagay dhammaan shaqaalaha.
13. Dhamaan ururada ubaahan ka qeybqaadashada xoogan sida tababarka guriga iyo shirarka dib ayaa loo dhigay.
14. Waxyaabaha laga qabanayo nadaafadda shaqsiyeed ayaa bilaabatay in lala wadaago shaqaalahayaga iyo rakaabkeena si joogto ah.
Kadib dhammaan daraasadahan, qorshayaasha jawaab celinta, fikradaha rakaabka, sharraxaadda iyo digniinta ay sameeyeen MMI iyo Wasaaradda Caafimaadka ayaa la qiimeeyay qorshooyinka waxqabadka ayaa loo sameeyay wejiga xiga.
Shilalka Gawaarida iyo Tallaabooyinka Mitigation
Duulimaadyada Habeenkii Cawayska